कहाँकहाँ भयो माओवादीको चुनावी तालमेल ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मुलतः एक्लै लड्यो । सीमित ठाउँमा मात्र चुनावी तालमेल भएको छ । अधिकारसहित स्थानीय सत्ता स्थापना गर्ने माओवादीको अजेण्डा हो । जनयुद्धकालीन अजेण्डा हो । जसले जिते पनि माओवादीको अजेण्डाले जित्नेछ । चुनावी तालमेल गर्ने कोशिश भए पनि खासै भएन । महानगरपालिका वाहेक जिल्ला र स्थानीय तहलाई नै तालमेलको जिम्मेवारी दिइएको थियो । महानगरपालिकामा केन्द्रबाट गर्ने भनिएकोमा भरतपुर र पोखरामा मात्र भएको छ । दुवै ठाउँमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रक...बाँकी
‘जसको नीति उसकै नेतृत्व’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की प्रवक्ता पम्फा भुसालले यो निर्वाचनले जसको नीति उसकै नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्दै दृढता व्यक्त गरिन । जसको नीति उसकै नेतृत्व हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले यही नारा दिएको थियो र जितेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यही नाराले सार्थकता पाउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन । माओवादीले नै सिंहदरवारको अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म लैजान खोजेकाले यसको असली कार्यान्वयन पनि यसले नै गर्दा ठीक हुने उनको भनाइ थियो ।...बाँकी
अदालतद्वारा क्षेत्राधिकार उल्लंघनः माओवादी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्दै गएको बताएकी छिन । ‘कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै गएपछि एक तिहाइ सांसदले न्यायपालिकाका प्रमुख सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार समेत नाघेको छ’ भन्दै प्रवक्ता पम्फा भुसाले भनिन– ‘सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिकालाई समेत चुनौती दिने गरी जुन फैसला आय...बाँकी
२२ वैशाख, काठमाडौँ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेमध्ये एक हजार ४९८ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा १३ हजार ५६५ पदका लागि हुने निर्वाचनमा ४९ हजार २०७ जनाको उम्मेवारी परेको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडाँैमा ५४, ललितपुरका ३५, भक्तपुरमा ३२ काभ्रे २६, सिन्धुपाल्चोकमा ४५, नुवाकोटमा ७२, धादिङमा ५७, रसुवामा २७, सिन्धुलीमा १६, रामेछापमा ३३ दोलखामा ४७, मकवानपुरमा ३६ र चितवनमा ३० जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन । ...बाँकी
तनहुँमा एमालेले लिखित सहमति तोड्यो
तनहुँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले महानगरपालिका वाहेक केन्द्रबाट निर्वाचनका लागि तालमेल गरेन । जिल्लालाई नै तालमेलका लागि जिम्मा दियो । तनहुँमा माओवादी केन्द्र र एमालेसँग अधिकांश ठाउँमा चुनावी तालमेलका लागि लिखित सहमति पनि भयो । माओवादी केन्द्रले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन ग¥यो तर एमालेले धोका दियो । तनहुँको भीमाद नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई समर्थन गर्दै प्रमुख तथा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएन । भानु नगरपालिकामा प्रमुखमा पनि खाली नै राखियो । उपप्रमुख...बाँकी
महाअभियोग प्रस्ताव संसद् बैठकमा प्रवेश
२२ वैशाख, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा प्रवेश पाएको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीका विरुद्ध यही वैशाख १७ गते महाअभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । सदनको आजको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरुको होहल्लाका बीच प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता...बाँकी
नयाँशक्तिको उमेदवारले गरे अपहरणको नाटक, चुनाव प्रभावित गर्ने रणनीति
काठमाडौं । अपहरणमा परेको भनी चर्चामा आएका नयाँ शक्ति पार्टीका उम्मेदवारी गोदावरीबाट प्रहरीले फेला पारेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध महाशाखाले सयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आज बिहान गोदावरीबाट उनी सम्पर्कमा आएका जानकारी दिएको हो । नयाँशक्ति पार्टीको तर्फवाट काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ७ को अध्यक्षका लागि मदन गिरीले उम्मेदवारी दिएका छन् । गिरिले दुई दिन अघि आफू अपहरणमा परेको भन्दै नयाँशक्ति पार्टीका नेता प्रताप दानीलाई एसएमएस पठाएका थिए । एसएमएसमा उनल...बाँकी
‘मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भनी विपक्षीले नै सबैभन्दा बढी हल्ला चलाए’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका उम्मेदवार सर्वाेत्तम डंगोलले छाडेको भन्दै विहीबार दिनभरि चर्चा भयो । भरतपुर महानगरपालिकामा र पोखरा महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएसँगै काठमाडौं पनि त्यो हल्ला भयो । ललितपुरमा माओवादी केन्द्र र काठमाडौंमा कांग्रेसलाई छाड्ने चर्चा दिनभरि चलिरह्यो । तपाईले उम्मेदवार छाडेको भनेर एकाएक हल्लाचल्यो, किन ? कसले हल्ला चलाए होलान ? सुरुमा चुनाव एकता र तालमेलको कुरा हा...बाँकी
उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकासन आज र चुनाव चिन्ह पनि वितरण हुँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली आज प्रकाशन गर्दैछ । आज १० बजेबाट ११ बजेभित्र नामावली प्रकासन गरिसक्नु पर्ने आयोगको कार्यतालिका रहेको छ । विहीबार बेलुका साँझसम्म उम्मेदवार फिर्ता लिने समय आयोगले तोकेको थियो । राजनीतिक दलहरुको तालमेलका कारण कतिपय उम्मेद्वारको नामावली फिर्ता भइसकेको छ। मंगलबार उम्मेदवार दर्ता गराएका र बिहीबार पाँच बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले आज अन्तिम नामावली प्रकासन गर्न लागेको हो । त्यस्...बाँकी
रुकुम, २२ वैशाख । यहाँ विहिबार दिउँसो नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिका–६ मा झडप हुँदा आठजना घाइते भएका छन् । झडपका क्रममा नेपाल तरुण दलका तीन र वाइसिएलका पाँचजना कार्यकर्ता घाइते भएको बताइएको छ । नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल तरुण दलको आन्तरिक बैठक बसिरहेको अवस्थामा वाइसिएलले आक्रमण गर्न छोजेपछि झडप भएको तरुण दलका वडाध्यक्ष उम्मेदबार विनोद कुसारीले जानकारी दिए । तर माओवादीले भने आफ्ना कार्यकर्ता बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थ...बाँकी